भारतको १४ औं राष्ट्रपतिमा प्रणव मुखर्जी
सन् २०१२ जुलाई २५ मा पूर्वअर्थमन्त्री एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ प्रणव मुखर्जीले १४ औं राष्ट्रपतिका रुपमा शपथ लिएका छन् । जुलाई २२ मा भएको निर्वाचनमा झण्डै ७१ प्रतिशत मत प्राप्त गरी उनी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए । पाँच वर्षे कार्यकाल रहने यस राष्ट्रपति पदमा प्रतिद्वन्दी पूर्वसभामूख पीए संघाम थिए ।
4 गोल्ड ईटीएफ भनेको के हो ?
5 पर्यावरणीय संरक्षण भन्नाले के बुझिन्छ ?
6 आर्थिक विकासमा बिभिन्न क्षेत्रको भूमिका
9 दक्षिणी सुडानको स्थापना